परमात्माको सरलता | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७५ बैशाख १६, आईतवार १०:५२ गते
महात्मा जिसस क्रुसमा टाँगिनुभएको पनि हजारौँ वर्षहरु बितेका थिए । जिससलाई मानिसहरुले आपूmले दिन खोजेको सत्यसन्देश राम्ररी बुझ्न सकेनन् भन्ने लागेको थियो । मानिसमा सत्यलाई पूर्णतः बुझ्न सक्ने चेतना र बोधको अवस्थाको सिर्जना नभएको बेलामा आपूmले जन्म लिएछु भन्ने पनि जिससले सोच्नुभएको थियो । मानिसको चिन्तन र ग्रहण शक्ति परिपक्व नहुँदै आपूm जन्मिएर उनीहरुलाई सत्यको सन्देश दिएका हुनाले अपेक्षा गरेजति मानिसको जीवनमा रुपान्तरण नभएको उहाँको बुझाइ थियो ।
भगवान् जिससले क्रुसमा किन जीवनको बलिदान गर्नुभयो र धर्तीमा अवतार लिनुको अर्थ के थियो भन्ने कुरालाई मानिसले गम्भीरतासाथ लिएको देखिएन । उहाँले सोच्नुभयो— ‘यतिखेर विश्वभरि धेरै चर्चहरु बनिसकेका छन् । मानिसहरुले मेरो सम्झनामा बत्तीहरु पनि बालेका छन् र घण्टीहरु पनि बजाइरहेका छन् । सायद, यो उपयुक्त समय हुनसक्छ । अब म फेरि गएर मानिसहरुलाई सत्यको शिक्षा दिनुप¥यो ।’
यति सोचेर जिसस आफ्नो गाउँ बेथलहेम ओर्लनुभयो । त्यो आइतबारको दिन थियो । मानिसहरु चर्चमा जिससको प्रार्थना गर्दै बाहिरिँदै गर्ने क्रम जारी थियो । उहाँले अब भने आफ्नो परिचय दिनुनपर्ने र मानिसहरु आपैmँले सजिलै चिन्नेछन् भन्ने अनुमान गर्नुभयो । पहिलोपटक उहाँले मानिसहरुलाई भन्नुभएको कुरा उहाँले सम्झनुभयो । त्यतिखेर उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘म, भगवान्को पुत्र हुँ, मैले तपाईंका लागि प्रभुका तर्फबाट दिव्य आशिष् र सन्देश लिएर आएको छु ।’
त्यतिखेर जिससले मानिसका निम्ति व्यक्त गर्नुभएको सन्देशकै कारण उहाँले क्रुसमा झुन्डिएर रगत बगाउनुपरेको थियो तर उहाँले सोच्नुभयो– ‘आज समय बदलिएको छ । मानिसको बोध र ज्ञानको गहिराइ पनि बढेर गएको छ । यतिखेर भने मानिसहरुले मलाई अवश्य चिन्नेछन् र पहिलेभन्दा धेरै राम्ररी बुझ्नेछन् ।’
जिसस भर्खरै चर्चमा प्रार्थना गरेर निस्किएका मानिसका नजिकै जानुभयो । उहाँको पहिरन अत्यन्त सामान्य थियो । उहाँले अनुमान गरेजस्तै कसैले पनि उहाँलाई चिन्न सकेनन् । उहाँले आपूm जिसस भएको पनि बताउनुभयो तर उनीहरुले पत्याएनन् । मानिसहरुले उहाँको कुरालाई हाँसोमा उँडाइदिए । ‘कुनै पागल बेसुरमा बर्बराउँदै आपूmलाई जिसस भनेर भन्दै छ’ भन्ने उनीहरुले ठाने । उनीहरुले आपूmलाई चिन्न नसकेको देखेर फेरि जिससले भन्नुभयो– ‘तपाईंहरुले किन विश्वास नगर्नुभएको ? म त्यही जिसस हुँ, जसलाई तपाईंहरुले भर्खरै चर्चभित्र प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो ।’
मानिसहरु यसपटक झन् जोडले हाँसे र उहाँको कुरालाई हावामा उडाउने काम गरे । उनीहरुमध्ये एकजनाले भनि पनि हाल्यो– ‘तँ यहाँबाट तुरून्त गइहाल्, नत्र चर्चको पूजारीले तँलाई घोक्रेठ्याक लगाएर निकाल्ला । त्यसपछि तँ ठूलो समस्यमा पर्छस् । चर्चका धर्मगुरू आउनुभन्दा पहिले नै भागिहाल् ।’ जिससले अन्तिमपटक उनीहरुप्रति फर्कंदै गम्भीर भएर सोध्नुभयो– ‘के तपाईंहरु साँच्चै मलाई चिन्न असमर्थ नै हुनुभएको हो त ?’
यसैबीच, चर्चको पादरी अथवा पूजारी भनौँ, आइपुग्यो । जिसस अभैm आशावादी हुनुहुन्थ्यो । ‘कम से कम यो पादरीले त मलाई चिन्ला !’ भन्ने उहाँलाई लागेको थियो । तर, यसपटक पनि उहाँको अनुमान ठीक हुन सकेन । मानिसका बीचबाट चर्चको त्यो पादरीले उहाँलाई समातेर भित्र लिएर गयो, एउटा कोठामा बन्द गरिदियो र बाहिरबाट ताल्चा लगाइदियो ।
रात छिप्पिने क्रम जारी थियो । जिसस जेलमै त होइन, तर जेलजस्तै एउटा कोठामा थुनिएर बस्नुभएको थियो । दिउँसो उहाँलाई समातेर त्यस कोठामा बन्दी बनाउने पादरी हातमा लालटिन लिएर सुनसान रातमा एक्लै आइपुग्यो । जिससका दुवै खुट्टा समातेर उहाँलाई ढोग्यो । जिससलाई ढोगिसकेपछि उहाँलाई सम्बोधन गर्दै पादरीले भन्यो– ‘मैले तपाईंलाई पहिल्यै चिनेको थिएँ । तर समस्या के थियो भने तपाईंले फेरि त्यहाँ सत्य, दर्शन र धर्मका बारेमा बोल्न थाल्नुहुनेथियो । तपाईंले बोल्न थालेपछि त्यहाँ ठूलो होहल्ला हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्थ्यो । आज पनि मानिस जस्ताको त्यस्तै छ । संसार परिपक्व भइसकेको छैन, यतिका वर्षबीच पनि । संसारले अभैm पनि उनीहरुलाई सहन सक्दैन, जो सत्य बोल्दछन् । मानिसहरुले सभ्यताको यस क्षणमा आइपुग्दा पनि सत्यका अभ्यासीलाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । तपाईंले जे चाहनुहुन्छ त्यो त गर्नूस्, तर पण्डित पुरोहितमार्फत गर्नूस्, पादरी र धर्मगुरूहरुमार्पmत गर्नूस्, स्वयम् नगर्नूस् ।’
पादरीले जिससलाई विशेष जोडका साथ भनेको एउटा वाक्य थियो– ‘मानिसहरुले तपाईंको पूजा गर्न सक्दछन् तर तपाईंको उपस्थिति स्वीकार्न सक्दैनन्, किनकि सत्यको उपस्थितिले उनीहरुको भ्रम चकनाचुर हुने सम्भावना हुन्छ ।’ पादरीका कुरा सुनेर प्रभु यशु गम्भीरताका साथ मुस्कुराउनुभयो मात्र ।
मानिस प्रत्यक्षबाट सधैँ टाढा भागिरहेको हुन्छ । प्रत्यक्षलाई सामना गर्ने साहस मानिसमा सम्भवतः आजसम्म पनि विकसित भएको छैन, त्यसैले जिससहरु अपमानित हुनेगर्दछन् । मानिसमा सत्यको तेज, ओज र प्रभावको सामना गर्ने साहस र हिम्मत नै छैन आज, त्यसैले उसले घुमाएर सत्यलाई पाउन खोज्दछ, लुकेर सत्यका बारे जान्ने प्रयत्न मात्र गर्दछ । मानिसको जीवन यही साधनामा मात्र बितेको छ, साध्य त कता हो कता ।
ओशोले आफ्नो प्रवचनमा पनि भन्ने गर्दछन्– ‘बुद्ध पुरूषहरुले व्यक्त गरेका धारणा र विचारहरु हजारौँ वर्षपछिका लागि हुन् । कृष्णले हजारौँ वर्षअघि व्यक्त गरेका विचार र निर्देशनहरु आजसम्म पनि पालन गरिएको अवस्था छैन । आज पनि मानिसलाई कृष्णले सत्यका बारेमा, जीवनको बारेमा व्यक्त गरेका दिशानिर्देशहरु कल्पनाजस्तै लाग्दछन्, आदर्शजस्ता मात्र लाग्दछन्, यद्यपि भगवान् श्रीकृष्णले त्यो ज्ञान दिनुभएको पनि आज हजारौँ वर्ष बितेको अवस्था छ ।
मानिसले यद्यपि धेरै उन्नति र प्रगति गरेको दाबी गरेको छ, ज्ञान र विज्ञानको क्षेत्रमा अद्भुत चमत्कार गरेको गौरव उसमा छ, तापनि सत्यको अलिकति अनुभूति गर्न भ्याएको देखिँदैन । हामीसँग ज्ञानको कमी छैन, निर्देशन र आदेशको पनि अभाव छैन, तर अभ्यासका लागि तत्परताको अभाव छ । हामी ज्ञान र विज्ञानको अत्यन्त सतहमा छौँ, केवल परिधिमा छौँ । ‘क्राइस्ट’ र ‘कृष्ण’हरुले दिएका सत्यसन्देशको उचाइका अगाडि हामी अत्यन्त वामपुड्के छौँ ।
पात्रताविना कुनै पनि कुरा सम्भव छैन । हामीले जस्ता पात्रहरु छन्, त्यस्तै किसिमका कुरा गर्नुपर्दछ । नपढेका मान्छेलाई पढाइका कुरा गर्दा त्यति राम्रो हुँदैन । समय, परिवेश र पात्र सुहाउँदो भएन भने राम्रो कुरा पनि नराम्रो बन्ने खतरा हुन्छ, अमृत पनि विष बन्ने खतरा हुन्छ । भगवान् गौतम बुद्ध बोधको अत्यन्त उचाइमा पुग्नुभएको थियो । उहाँले जति पनि कुरा गर्नुभयो बोधको त्यो उपल्लो उचाइबाट गर्नुभएको थियो । यता मानिस भने अज्ञानकै सतहमा छ, भोग र वासनाकै किनारमा छ । त्यसैले, भगवान् गौतम बुद्धको बोधको उचाइ र मानिसको भोगका उचाइमा एकरुपता कायम हुन सकेन । भगवान् बुद्धले योगको स्थानबाट अहिंसाको कुरा गर्नुभएको थियो, तर उहाँका उपासकहरुले भोगको दुनियाँबाट त्यसलाई बुझे अनि हिंसालाई अनुमोदन गरे ।
सनातन हिन्दु धर्मसंस्कृतिका आचार्यहरुले पनि प्रतीक अर्थमा साधना र योगको उपल्लो उचाइबाट मनभित्रका कुकर्महरुको बलि दिनुपर्ने सत्यको सन्देश दिन खोजेका थिए, तर भोगका दुनियाँमा चुर्लुम्म डुबेका कथित सनातनीहरुले निरीह पशु र प्राणीको हिंसा गरेर देवदेवीहरुमा बलि चढाउने कुसंस्कृतिको निर्माण गरे, जिब्रोको स्तरबाट । जिससको हकमा पनि यही भएको हो । उहाँप्रतिको श्रद्धा केवल देखाउनका लागि मात्र हो, जीवनमा स्वीकार गर्नका लागि होइन ।
बुद्ध, कृष्ण, जिसस, मुहम्मदहरु विवेकको भाषा बोलिरहेका हुुन्छन्, परमेचतनाको गहिराइबाट उनीहरुले जीवनको सत्यलाई उद्घाटित गरिहेका हुन्छन्, तर मानिसले ती सन्देशलाई इन्द्रिय, भोग र लालसाको कानले सुन्ने र बुझ्ने गर्दछन् । त्यसैले, बुद्धले हिंसा गर्न हुन्न भन्दाभन्दै पनि उहाँका भक्तहरु मासु खाइरहेका छन्, कृष्णले दिन खोजेको प्रेमको सन्देशलाई उहाँका भक्तहरुले शारीरिक भोगविलास मानेर व्यवहार गरिरहेका छन् । हामीले त अर्काका लागि धर्म गरिरहेका छौँ, हाम्रो जीवन अर्काको हातमा छ । हामीले चाहने हो भने ईश्वरहरु हाम्रै आँखाअगाडि भेट्न सक्दछौँ, तर हामी चाहँदैनौँ । हामी अरु मान्छेले जस्तै देवताको काँधमा चढेर चारधाम यात्रा गर्न मन पराउँछौँ । हामीले धर्म गर्दा साक्षात् देवतामाथि अधर्म भएको ख्याल गर्न सक्दैनौँ । धर्मलाई आज व्यापार र आडम्बरको केन्द्र बनाइएको छ ।
जिसस नजिकै हुुनुहुन्थ्यो । उहाँले भन्नुभएको कुरामाथि कसैले पनि विश्वास गरेनन्, जबकि उनीहरु भर्खरै जिससकै नाममा प्रार्थना गरेर बाहिर आएका थिए । उनीहरुले परमेश्वरलाई पागलको संज्ञा दिए, विक्षिप्तको संज्ञा दिए । धेरै मान्छे चर्चमा प्रार्थना गर्न यसकारण आउँछन् किनभने धेरै मान्छे त्यसरी आएका छन् । आममान्छेले जे गरेको छ, त्यसैको अनुकरण गर्नु नै आज हामी मानिसको नियतिजस्तै बनेको छ । सत्य एकातिर छ, हामी एकातिर छौँ ।
यदि हामीले सत्यको खोजी गरेका हुन्थ्यौँ भने त नजिकैको सत्यलाई चिन्न सक्थ्यौँ नि त । मानिसले प्रार्थना गरेको सुनेपछि जिसस नजिकै आउनुभएकै त थियो त, खै त उहाँलाई कसैले चिन्न सकेनन् त । सत्यलाई त हामीले कोठाभित्र ताल्चा लगाएर थुनिदिन्छौँ किनकि हामीमा सत्यको सामना गर्ने साहस र शक्ति छैन ।
हाम्रा अगाडि थुप्रैथुप्रै देवताहरु छन्, भगवान्हरुले नजिकै आएर ‘म भगवान् हुँ भनिरहेकै छन्, तर हामी पत्याउँदैनौँ । हामी भगवान्को भनाइलाई पनि हाँसोमा उँडाइदिन्छौँ । यसो गरेर थाहा छैन, खै हामीले कुन देवताको पूजा गरिरहेका छौँ ? कुन परमेश्वरको प्रार्थना गरिरहेका छौँ ? अथवा गरेका छौँ कि छैनौँ कुन्नि ?
आज नास्तिकहरुले धर्मको ठेक्का लिएका छन् र देवताहरु चिचिन छाडेका छन् । मूर्तिमा पूजा गर्दैमा कोही धार्मिक हुन सक्दैन, चर्चमा प्रार्थना गर्दैमा कोही परमेश्वरको भक्त हुन सक्दैन, मस्जिदमा नमाज पढ्दैमा मात्र पनि कोही अल्लाहको प्रिय हुन सक्दैन । सबैभन्दा ठूलो कुरा त भगवान्लाई चिन्न सक्नुपर्दछ । जसले भगवान् चिन्न सक्दैन, त्यो आस्तिक हुन सक्दैन । केवल ढुङ्गाको मूर्तीमा पूजा, प्रार्थना र आरति मात्र गर्दछ, तर भगवान् र उहाँका सन्देशहरुलाई बुझ्न सक्दैन, ऊ नास्तिक हो ।
हाम्रा अगाडि देवताहरुले विभिन्न रुप लिएर आएका हुन्छन् । तर, हामी तिनलाई चिन्न सक्दैनौँ । देवताप्रति हामीमा विश्वासै छैन, त्यही विश्वासको अभावमा नै जिससहरुले प्रत्यक्ष उपस्थित भएर ‘म परमेश्वर हुँ’ भन्दा पनि हामी गलल हाँसेर उनीहरुलाई गिज्याइदिन्छौँ ।’ अनि भगवान्को विश्वास नहुनेहरुलाई नास्तिक नभनेर के भन्ने त ?
आज हामीकहाँ आस्तिकताको खेती गर्ने नास्तिकहरु छन् । धर्मको व्यवसाय गर्ने अधार्मिकहरु छन् । यिनकै कारण क्राइस्ट र कृष्णहरु अपमानित हुन बाध्य भएका हुन् । परमेश्वर हामीभैmँ ठूलो भुँडी भएका, छालाका टल्किने जुत्ता, टाई, सुट र कोट लगाएर कहाँ आउँछन् र ? उनी त अचम्मका छन् । उनको रुपको बारेमा केही भन्न सकिन्न । धेरैजसो उनी हामीलाई झुक्याउन सामान्य, झुत्रेझाम्रे, सरल र चिन्न नै गा¥हो हुने तरिकाले आउँछन् । उनी हाम्रा परीक्षक हुन्, हामी तिनका परीक्षार्थी । त्यसैले, हेर्दा पागलजस्ता देखिए पनि, झुत्रेझाम्रे देखिए पनि ती साक्षात् परमेश्वर हुन्, यो सत्यलाई कहिल्यै नभुलौँ ।
भगवान् अनेक रुप लिएर हाम्रावरिपरि घुमिरहेका हुन्छन् । कीटपतङ्ग, जीवनजनावर, बोटबिरूवा, धनीगरिब, रोगी, बालक, वृद्ध सबैसबै परमेश्वरका रुप हुन् । हामीले आँखा खोल्दा जे देख्छौँ, त्यही परमेश्वरको रुप हो । सबैमा ईश्वरको दर्शन गर्न सक्नुलाई नै आस्तिकता भनिन्छ । नास्तिकता आस्तिकताजस्तो सार्वभौम हुन सक्दैन । जसले ईश्वर मन्दिर, मस्जिद र चर्चमाबाहेक कतै हुँदैनन् भन्ने सोच्दछ र वरपरका ईश्वरप्रति अनादर गर्दछ, त्यो सबैभन्दा ठूलो नास्तिक हो । उसले ईश्वरको गौरवलाई कमजोर बनाउनेभन्दा अर्को कुनै काम गर्दैन । हामीकहाँ धर्मको आडम्बरमा साक्षात् ईश्वरको अनादर गर्ने नास्तिकहरुको भीड छ । धर्म र ईश्वरको मर्मलाई कमजोर बनाउनेहरु पनि यिनै हुन् ।
हामीले अब ईश्वरको अनादर नगरौँ । नजिकका ईश्वरलाई गिज्याएर कहिल्यै नभेटिने परमेश्वरको खोजमा समय खर्च नगरौँ । हाम्रैअगाडि प्रेमको हात पैmलाएर टिलपिल टिलपिल नेत्रले हामीसँग करूण याचना गर्ने क्राइस्ट र कृष्णको चरण स्पर्श गरौँ । नजिकको तीर्थ हेलाँ नगरौँ । जोसँग प्रभुको सन्देशलाई आत्मसात् गर्ने हृदय छ, जोसँग साक्षात् परमेश्वरको दर्शन गर्न सक्ने दृष्टि छ, त्यही सच्चा आस्तिक हो, पक्का ईश्वरभक्त हो । कुनै वस्त्रविशेष, पहिरन, भाषा वा परिधानभित्र आस्तिकता कैद हुन सक्दैन । आस्तिकता सबै प्रकारका आडम्बरदेखि मुक्त हुन्छ र परमेश्वर पनि सबै प्रकारका आडम्बरबाट मुक्त सरल, सामान्य र प्रेमपूर्ण हुन्छन् । हामीले परमेश्वरको यो सादगीलाई कहिल्यै नभुलौँ । के अभैm पनि तपाईं परमेश्वर सुटेड, बुटेड र कोटेड भएर देखापर्दछन् भन्ने ठान्नुहुन्छ ? जिससलाई सुट, बुट र कोटमा मात्रै नखोजौँ । आस्तिकता आवरणमा होइन, अन्तस्करणमा विकास गरौँ ।